१०० महिला: के, के हुँदैछ? - BBC News नेपाली
१०० महिला: के, के हुँदैछ?
‘हन्ड्रेड विमिन’ अर्थात १०० महिला २०१६ अन्तरगत बीबीसीले संसारका विभिन्न स्थानका १०० जना प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिलाहरुको सूची तयार पारेको छ।
हामी महिलाहरुले गरेका परिवर्तनकारी संघर्ष, महिलावादी आन्दोलनसंग सम्बद्ध समावेशीताका बारे बहस अनि संगीत, खेलकुद, राजनीतिका विश्व प्रसिद्ध नेतृहरुका साथै कमै सुनिने महिला स्वरहरुलाई पनि तपाई सामु प्रस्तुत गर्दैछौं।
बीबीसीका अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषा सेवाहरुमा प्रसारण हुने केहि झलक:
गायिका तथा कवि एलिसिया किइजले हन्ड्रेड विमिन श्रृंखलाका लागि कुरा गर्दै जातिवाद, डोनल्ड ट्रम्प, छोराहरु हुर्काउंदाका अनुभवका साथै उनले आफ्नो स्वरुप किन अहिलेको जस्तो पारिन भन्ने विषयहरुमा चर्चा गरेकी छिन्।
सिमोन बाइल्सले सर्वोत्कृष्ट जिमनाष्ट बनेपछि, ओबामाको अमेरिकामा हुर्कंदा र र नयां हासिल प्रसिद्धि हासिल गरेपछिका विभिन्न अनुभवहरु बारे बताएकी छिन्।
अनि रुखहरुकी आमा भनेर चिनिने भारतकी १०५ बर्षिया सालुमरदा टिम्मक्का का बारे थाहा पाउन सक्नुहुनेछ जस्तले ग्रामिण भारतमा सयौं रुखहरु रोपेर हुर्काएकी छिन्।
'हन्ड्रेड विमिन' श्रृंखलाको अन्त्य हामी एउटा बहसबाट गर्नेछौं जस्मा हाम्रो प्रश्न हुनेछ: के इन्टरनेट लिंगवादी छ?
विकिपिडिया संसारको सातौं सबैभन्दा लोकप्रिय वेबसाइट हो तर त्यसका १५ प्रतिशत सम्पादक मात्र महिला छन् र १५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र त्यसमा उल्लेखनीय महिलाहरुका प्रोफाइहरु छन्।
त्यसैले बीबीसीले विकिडियासंगको सहकार्यमा १२ घण्टे विकिपिडिया सम्पादन लहर को आयोजना गर्दैछ।
एडीट-अ-थन भनिएको यो लहरका क्रममा हामी बढीभन्दा बढी महिलाहरुलाई महिलाहरुबारेका लेख र प्रोफाईलहरु तयार पार्न र सम्पादन गर्न प्रेरित गर्न चाहन्छौं।
डिसेम्बर आठ तारिखका दिन हामी तपाईंलाई यो अभियानमा संलग्न हुन आग्रह गर्दछौं।
तपाईं हाम्रो वेबसाइटमा गएर विकिपिडिया कसरी सम्पादन गर्ने सिक्न सक्नुहुन्छ र ह्याशट्याग #100womenwiki मा पनि सामेल हुन सक्नुहुन्छ।